Tuesday June 08, 2021 - 17:07:40 in Wararka by Liibaan Jeexoow
qaar kamid ah askartii soomaalida ee Eritrea lageeyay
Tuhunka ku saabsan in xukuumada Asmara ay maleeshiyaat Soomaali ah oo lagu tababarayey dalkeeda ku daabushay gobolka Tigreey ee waqooyiga dalka Itoobiya, si ay uga qeyb qaataan duullaankii ballaarnaa ee lagu qaaday jabhadda TPLF, wuxuu soo bilowday muddo hadda laga joogo ku dhawaad hal sano, balse dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa marwaliba oo uu sii xoogeysto tuhunkaas gaashaanka u daruuri jirtay, halka dhanka kalena ay isa soo tarayeen caddeymo caksi ah oo muujinaya in aanan faro lagu heynin askartii loo qaaday Eritrea.
Laakiin waxay maalinba meel soo istaagto waxaa markii ugu horeysay qadiyadan lagu soo hadal qaaday warbixin kasoo baxday gudiga xuquuqul insaanka ee QM, taas oo looga hadlayey arimaha bani’aadanimo ee dalka Eritrea.
Warbixintan oo ka koobneyd 17 page ayaa inta badan lagu qaada dhigayey arrimo ku saabsan dambiyada xuquuqda aadanaha ee ka socda gudaha dalka Eritrea balse arrinta sida aadka ah u soo jiidatay warbaahinta Soomaalida ee laga soo baxay warbixinta ayaa ah in guddiga soo diyaariyey diraasadaas xilli uu ka hadlayey kaalinta Eritrea ee duullaanka gobolka Tigree uu soo hadal qaaday in Eritrea ay duullaankaas u adeegsatay maleeshiyaat Soomaali ah oo tababar ahaan u joogay dalkeeda.
"Warbixinada aan helnay waxay sheegayaan in askar badan oo Soomaali ah laga soo daabulay xeryo tababar oo ku yaalla Eritrea lana geeyey jiida dagaalka ee gobolka Tigreey, halkaas oo iyagoo ka garab dagaalamaya ciidanka Eritrea ay kaga qeybgaleen duullaankii lagu qaaday gobolka Tigree” ayaa lagu yiri warbixinta.
Warbixinta kasoo baxday gudiga xuquuqul insaanka ee QM ayaa sidoo kale lagu sheegay in marqaatiyaal badan ay xaqiijiyeen in askar Soomaali ah lagu arkay magaalooyin ku yaalla dalka Itoobiya "waxaa sidoo kale naloo soo sheegay in dagaalyahano Soomaali ah ay hadda joogaan hareeraha magaalada Aksum” ayaa lagu yiri warbixinta.
DF Soomaaliya ayaa dhowr jeer dafirtay eedeymaha ku aadan in maleeshiyaat ay tababar u geysay dalka Eritrea ay ka qeybgaleen dagaalkii lagu qaaday gobolka Tigree islamarkaana ay dhalinyaro badan oo Soomaali ah ku halaagsameen dagaaladaasi, balse qoysaska ay ka dhasheen askartaas lagu qamaaray ayaa ku dhawaad muddo sanad ah hortaagnaa warbaahinta, iyagoo aaminsan in wiilashooda ay ku le’deen dagaaladaasi.
Kooxda Farmaajo ayaa maleeshiyaatkan markii ay diiwaan gelineysay ku qancisay in loo qaadi doono dalka Qatar, balse markii la diiwaan geliyey kadib ayaa looga baxay ballanka, islamarkaana loo daabulay dalka Eritrea waxaana lagu qanciyay in ay noqon doonaan askar katirsan dowladda balse ugu dambeyntii Eritrea ayaa markale uga baxday ballankii, islamarkaana ka dhigatay adoomo ay u adeegsatay qamcinta maleeshiyaatkii Tigreega ee TPLF.
Inkastoo dowladda Federaalka Soomaaliya ay horay u dafirtay dhamaan eedeymaha ku saabsan in maleeshiyaatkii ay u qaaday Eritrea ka baxeen faraheeda, hadana ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ay ka tiri cadeymaha cusub ee ay soo bandhigtay hay’adda QM ee ku aadan in maleeshiyaatkaas loo adeegsaday duullaankii gobolka Tigree, haraadiga dagaalkaas ka bad-baadayna ay hadda ku sugan yihiin difaacyada la isku horfadiyo ee hareeraha mgaalada Aksum ee waqooyiga ee Itoobiya.
Waa xaqiijintii ugu horraysay ee caalami ahaan usoo baxdo waxayna arrintani fadeexad ku noqon doontaa dowladda Federaalka oo dhalinyaradii soomaaliyeed xaabo uga dhigtay dagaal aan dagaalkooda aheyn, murugada iyo uur kutaallada ugu daran waxay haysataa waalidiinta soomaaliyeed ee ubadkooda ladhagray.
Jabhadda TPLF oo weerar jidgal ah udhigtay ciidamo katirsan dowladda Eritrea.
Jeneraal Odawaa oo isku day dil ka badabaaday iyo weeraro ka dhacay Sh/dhexe [Warbixin].
Dowladda Kenya oo xaqiijisay in askar looga dilay weeraro ka dhacay Lamu.
Madaxweynaha Eritrea oo booqasho aan qorshaysnayn ku tagay wadanka Suudaan.